Ivumba elibi kwilungu lobudoda | Amadoda aQinisekileyo
Ivumba elibi kwilungu lobudoda
Amadoda aQinisekileyo | | ZeMpilo
El pene inevumba elikhethekileyo nelimpawu lomntu ngamnye. Ingxaki kuxa ivumba linganyamezeleki kwaye lenza ukuba abafazi bakugatye.
Eli vumba alinanto yakwenza nococeko olugcinayo, unokulicoca nangaliphi na ixesha, kodwa nangona kunjalo kwaye lonke ivumba liya kuhlala.
Ukuba sele uyihlambulule ngokufanelekileyo ipenisi yakho kwaye nevumba liyaqhubeka, kuya kufuneka ubonane nogqirha, kuba isenokuba ngenxa yosulelo olubiziweyo candidiasis.
I-Candidiasis sisifo esibangelwa ngundo (i-candida albicans) kwaye sinokubonakala ikakhulu kwilungu lesini. Olona hlobo luqhelekileyo lokusasazeka kukunxibelelana ngokwesondo, kodwa inokubakho nakwimpahla okanye izinto ezisetyenzisiweyo.
Iimpawu zibonakaliswa zizilonda zolusu (ukuba bomvu okanye ukudumba kolusu) kuhamba nerhashalala. Ixesha layo lokufukama ziintsuku ezisi-8 ukuya kwezi-15.
Ukuthintela ukosuleleka yile fungus, kungcono ukugcina ucoceko kwindawo leyo, ukuyigcina icocekile kwaye yomile.
Ke ngoko, ukuba unevumba elibi elivela kwilungu lobudoda, ndincoma ukuba uqhagamshelane nogqirha. Sukuba neentloni zokubeka ityala lakho kugqirha, kubi ukushiya ingxaki ngaphandle kokubonisana kwaye oko konakalisa ubomi bakho ngokwesondo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » ZeMpilo » Ivumba elibi kwilungu lobudoda
Molo, enkosi kakhulu ngolwazi olunikiweyo, iluncedo kakhulu, ndiyathemba ukuba uyaqhubeka nokubeka ulwazi kolu luhlu, enkosi kakhulu.
Awunakho ukubeka isisombululo njengokuhlamba kwaye "udibane nogqirha" ... uCaradura.
JAJAJAJAJAJAAJAJAAJAJA yinyani, khange athethe NALUTHI, le post ayinamsebenzi, kwaye ayisiyiyo "ngxaki" ingxaki, babekhangela kuphela iingcebiso zokwenza ukuba inuke kamnandi, endaweni yokunuka into ekufanele ukuba iyanuka
akukhathaleki nokuba uyihlamba kangakanani ihlala inephunga